ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်များ…
ဖေဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို ပြည်သူ့တပ်မတော်ကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။
ပြည်သူ့နောက်ကနေပြီး ပြည်သူ့ကို အကာအကွယ်ပေးမယ့် တပ်မတော်
ပြည်သူ့ကို စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်ရောက်ဆိုပြီး သွားတာ ကျမသဘောမကျဘူး။ သွားပုံသွားနည်းမမှန်ရင် ဦးတည်နေတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုယ်၌က ပုံပျက်သွားနိုင်လို့ သွားပုံသွားနည်းကလဲ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တရားမျှတမှုရှိအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ မတရားတဲ့ နည်းလမ်းတွေ မသုံးရဘူး။( ဂျပန်)
၁. ကြောက်နေတဲ့၊ အားငယ်နေတဲ့ စိတ်တွေ ရှိရင် ကျမတို့နှစ်ဆတိုး အလုပ်လုပ်ရမယ်။
၂. ခြိမ်းခြောက်တာ၊ အနှောက်အယှက် ပေးတာတွေကို ကျမတို့ အနေနဲ့လက်မခံနှိင်ဘူး။
၃. ဒီမိုကရေစီ စနစ်သာလျှင် လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ဆီလျှော်တယ်။
၄. ဒီမိုကရေစီ စနစ်သာလျှင် ပြည်သူလူထုရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို အာမခံနိုင်တယ်။
၅. ပြည်သူ လွတ်လပ်မှသာလျှင် နိုင်ငံလွတ်လပ်မှာဖြစ်တယ်။
၆. ဒီမိုကရေစီ ရရှိဖို့အတွက် အရေးကြီးတာ ကတော့စိတ်ဓါတ်ပဲ။
ရ. တခါတလေ မှဖြစ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး မဖြစ်ရဘူး။
၈. စိတ်ဓါတ်အပြည့် အ၀နဲ့ ကိုယ်လို ချင်တဲ့ ကိစ္စတခုကို ဖြစ်အောင်လုပ်၊ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့
ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့နဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် မအောင်မြင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။
၉. အပြောင်းအလဲ မြန်မြန် လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စတခုမှာ ကြံကြံခံရပ်တည်နိုင်ရမယ်။
၁၀. မကောင်းတဲ့ဖက်က မရပ်တည်ပဲနဲ့ ကောင်းတဲ့ဖက်က ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နိုင်ရမယ်။
၁၁. ခြိမ်းခြောက်လို့လဲ မကြောက်တက်၊ မက်လုံးတွေအပေါ်မှာလဲ စဉ်းစားဖို့ မလိုပဲ အမှန်တရားဖက်ရပ်တည် နိုင်ရမယ်။
၁၂. ခေါင်းငုံ့ခံတဲ့ စိတ်ဓါတ် တွေကိုတော့မမွေးကြပါနဲ့။
၁၃. ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ် ထိန်းသိမ်းထားပါ၊ အဲလိုထိန်းသိမ်းထားလို့ ရှိရင် ဒီမိုကရေစီ
၁၄. လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်တခုခု လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ တကယ်ပဲ စိတ်ဆန္ဒ ရှိမယ် ဆိုရင်
၁၅. ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်လို့ ခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းက ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှပြီးနိုင်တဲ့ ကိစ္စတခု
၁၆. ဒီမိုကရေစီမရ သေးတဲ့နိုင်ငံဟာ ဆထက်တပိုးကိုကြိုးစားရမယ်။
၁၇. မတရားတာတွေကိုမြင်ရင် တရားတဲ့ဘက်ကရပ်တည်ပေးကြပါ၊ တက်နိုင်သမျှအဘက်ဘက်
၁၈. လူငယ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ကို အခုအချိန်ထဲ ကနေပြီးတော့ အခြေချရမယ်။
အခုအချိန်ကထဲ ကနေပြီးတော့ တည်ဆောက်ရမယ်။
၁၉. လူငယ်တွေဟာ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓါတ်ကို အခု အချိန်ကတည်းကနေပြီးတော့ အခြချ တည်ဆောက်ထားမှ ကျမတို့ နိုင်ငံအတွက်၊ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် အတွက် အာမခံချက်ရှိမယ်။
၂၀. ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာမှု၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ တရားမျှတတဲ့
ဘက်ကရပ်တည်မှုတွေနဲ့ အမြန်ဆုံး အောင်မြင်သွားမယ်လို့ ကျမတို့ထင်ပါတယ်။
၂၁. နိုင်ငံရေး ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်း နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
၂၂. နိုင်ငံရေး စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ အမြဲထာဝစဉ် ရှင်သန်နေဖို့လိုပါတယ်။
၂၃. စီးပွားရေးဆိုတာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ၊ ပညာရေးဆိုတာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ၊ ကျန်းမာရေးဆိုတာလဲ နိုင်ငံရေးပဲ
၂၄. နိုင်ငံတနိုင်ငံ တကယ်ပဲတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဇွဲသတ္တိ၊ ၀ီရိယ လုံ့လ၊ စိတ်ခိုင်မြဲမှုတွေနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီလို ပြည်သူတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံမှ တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
၂၅. စနစ်ဆိုးရဲ့အောက်မှာ လူငယ်တွေဟာ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း မနေရပဲ သွေးမြေကျပြီး လှုပ်ရှားနေရတယ်၊ အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို ရှောင်ချင်တယ်၊ နောင်လဲ ထပ်မဖြစ်စေချင်ဘူး။
၂၆. လူထုကနေ ကြောက်နေမယ်ဆိုရင် ကြောက်သလိုပဲ ပိုပြီးဖိကြမယ်။
၂၇. ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာဟာ မှန်တဲ့ ကိစ္စကို လုပ်ရဲရမယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၈. “အသက်ရှင်ရကျိုး မနပ်ဘဲ နေရမဲ့ အစား၊ သေရတာဘဲ ကောင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ထားပြီး အသက်ရှင်ရကျိုးနပ်မယ့် ဒီမိုကရေစီ အကျိုးဖြစ်အောင် အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြပါလို့ ကျမ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၂၉. ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်ရေးအတွက်၊ ကိုယ့်လူမျိုး တိုးတတ်ရေးအတွက်၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ချမ်းသာရေးအတွက်၊ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့ ကျွန်မ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
၃၀. တပ်မတော်ဟာ ကြားနေပါ့မယ် နဝတဟာ ကြားနေပါ့မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၃၁. စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ တိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ ကိုက်ညီမှ ဖြစ်တာပါ။
၃၂. တချို့လူတွေဟာ အာဏာဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြဘူး။
၃၃. ဒီမူ၊ ဒီလူ တွေပဲ ထာဝရ အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာ ကျဆုံးတာပဲ။
၃၄. အခွင့်အရေး ယူတဲ့ ဘက်က အသာရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ အာဏာကို အလွဲသုံးစား လုပ်ရပြီပဲ။ အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်ရပြီပဲ။ အဲဒီတော့ ဒါကို ကျွန်မတို့ အားလုံး နားလည်ရမယ်။
၃၅. ခပ်တိုတို ပြောရလို့ရှိရင် ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်တွေကို ကိုယ်ကောင်းကောင်း ထိန်းထားကြပါ။ နောင်တတ်မဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို “အစိုးရ” ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒအရသာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်အောင် ပြည်သူလူထုက ထိန်းထားရမယ်။
၃၅. ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖာသာဆုံးဖြတ်ရမယ်။ နိုင်ငံရေး အရ၊ စီးပွားရေး အရ၊ ပညာရေး အရ ကြိုးစားကြပါ။
၃၇. နိုင်ငံရေး စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ခိုင်မာတယ်၊ သန့်စင်တယ်။
၃၈. နိုင်ငံေ၇းအတွက် လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး စိတ်ဓါတ် ထိပ်တန်းက အမြဲ ရှိနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်မ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
၃၉. လူငယ်များကလည်း ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကို အခုကတည်းက ကိုယ့်ဖာသာ ခင်းပြီးတော့ ဒီလမ်းကို ထိန်းသိမ်းသွားရမယ်။
၄၀. တချိန်တခါမှာ သားတို့ လူငယ်တွေဟာ ဒီတိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ဖို့လိုတယ်။ သြဇာ အာဏာဆိုတာ တာဝန်လို့ပဲ နားလည်ကြရမှာ။ အာဏာဆိုတာ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးလို့ နားလည်ရမယ်။
၄၁. ကိုယ့်တာဝန်မကျေပွန်ပဲ အာဏာမက်လို့ရှိရင် အင်မတန် သိက္ခာကျတယ် ဆိုတာ နားလည်ရမယ်။
၄၂. ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများဟာ သတ္တိရှိရှိ၊ စည်းကမ်းရှိရှိ စံနမူနာ ထားလောက်ပါတယ်။
၄၃. ချင်းပြည်နယ်မှာ အတော့်ကို ဖိနှိပ်ခံရတယ်။ တော်တော့်ကို ခြိမ်းခြောက်ခံရတယ်။
၄၄. ချင်း တိုင်းရင်းသားတွေဟာ သစ္စာတရား သိပ်ကြီးမားတာပဲ။ စိတ်ဓါတ်တန်ဖိုး ရှိတယ်။
၄၅. ဒီမိုကရေစီ ရအောင်လုပ်ဖို့ ကျွန်မတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။
၄၆. ဖေဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို ပြည်သူ့တပ်မတော်ကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။
၄၇. အများပြည်သူ သဘောမတူတဲ့ အမိန့်အာဏာ ဟူသမျှကို
တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြပါ။ တာဝန်အရ ဖီဆန်ရမယ်။
၄၈. လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။
၄၉. ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို အားကိုးပြီးလုပ်ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုပါ။
ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက်လည်း မဟုတ်ဘူး။
အများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက် လှုပ်ရှားနေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ လူကြီးတွေဟာ လူငယ်တွေကို ဘယ်လို အမွေအနှစ်တွေ ထားပစ်ခဲ့ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်။